आज कहाँ-कहाँ वर्षा र हिमपात ? - Deshko News Deshko News आज कहाँ-कहाँ वर्षा र हिमपात ? - Deshko News
आज कहाँ-कहाँ वर्षा र हिमपात ?
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज देशका केही स्थानहरुमा वर्षा र हिमपात हुनसक्ने पूर्वानुमान गरेको छ । महाशाखाले शनिबार बिहान जारी गरेको पूर्वानुमानका अनुसार आज देश पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको छ।
महाशाखाले अहिले देशका हुनै स्थानमा आँशिक र कुनै स्थानहरुमा सामान्य बदली रहेको जनाएको छ । यसैगरी, महाशाखाले आज दिउँसको मौसमको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै आज सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी प्रदेशका भूभागहरुमा आंशिक देखि सामान्य बदली रहने सम्भावना रहेको जानकारी दिएको छ ।
यता, प्रदेश १ का धेरै स्थानहरु तथा प्रदेश २, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरुमा हल्का वर्षाको संभावना रहेको छ । भने, देशका उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का देखि मध्यम हिमपातको सम्भावना पनि रहेको छ ।
यस्तै, आज राति प्रदेश १, प्रदेश २, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश आंशिकदेखि सामान्य बदली रही वाँकी स्थानहरुमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । भने, प्रदेश १, प्रदेश २ र बागमती प्रदेशका केही स्थानहरु साथै गण्डकी प्रदेशका एक वा दुई स्थानहरूमा हल्का वर्षाको संभावना रहेको छ ।
राति प्रदेश १, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको हुनसक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।